Kooxda alshabaab oo doondoonaya Gabadh Muqdisho ka Niikin Jirtay si ay dhagax ugu dilaan | Saraarnews
Kooxda alshabaab oo doondoonaya Gabadh Muqdisho ka Niikin Jirtay si ay dhagax ugu dilaan
Nayroobi(saraarnews) Faadumo Nuur Mohamed oo loo yaqaan Cagaburis kana mid ahayd Folklore dansigii Somalia ee kooxda Onkod,Ciidanka asluubta ayaa dirqi uga badbaaday Maleeshiyadda Al-Shabaab oo doonayay inay dhagax ku dilaan.
Dad la derisa ayaa Saxaafadda u sheegay inay tiro ka sedex jeer Maleeshiyadda Al-Shabaab tageen gurigeeda oo ku yaala degmadda Waaberi ee Magaaladda Muqdisho.
Afhayeenka Al-Shabaab Ali Mohamud Raage ayaa Warbaahinta u sheegay inay Fadumo Nuur laba jeer siiyeen digniin ay uga dalbanayeen inay joojiso fisqiga iyo fasahaada waxa uu ku sheegay,isagoo si gaara u tilmaamay inay heeso niiko ah la qaaday Makki Xaaji Banadir taas oo xukun ahaan u dhiganta macaasi sida uu ku dooday.
Heesaha Fanaanadda Fadumo Cagaburis la qaaday Makki Xaaji Banadir ee qaabka jilitaanka uga soo dhex muuqato iyadoo niiko ama dance sameeynee,waxaa ka mida HABARTAA NINKII QABO,MAXAAS KUU YAHAY,SHAANGAANI I AM SORY IYO ABOOWEEY TIRI,
Qalanjada Folklore-ka waxay sanadkii 2006 duubtay barnaamij dance ahaa oo ay ka soo dhexmuuqatay kooxdii ABUNA ee SHAMSUL AMAL MUQDISHO.
Fadumo Nuur oo la waayay meel iyo cirib iyo jaandhigtay waxaan kula kulanay Magaaladda Nairobi ee dalka Kenya.
Fanaanadda muuqaal ahaan waa ay ka duwaneed marka ay heesaha la qaadeysay Makki Xaaji Banadir,waxaa wejigeeda ka muuqday diif iyo haraad fara badan,waxay deganeed guri hal qol ah oo ay kula noolaayeen laba Caruur ay dhashay.
Qolka Ciriiriga badan ee Fanaanadda Falkaloorka dhex fadhisay ma laheyn joodari balse waxay Caruurteeda ku jiifeen busto yar oo ay noo sheegtay inay siisay gabadh ku jirta xerada qaxootiga Xagardheer.
Labada gabdhood ee jiifay qolka yar mid waa agoon uu dhalay Abukar Mursal Mohamed allaha u naxariistee.wuxuuse fikirka ugu weyn yahay wiilkeeda Sadiiq Mohamed Hassan oo aysan nolol iyo geeri ku heyn ,maadama ay Muqdisho isugu dambeysay.
Fadumo Nuur waxaan waydiinay sababaha qasbay in Al-Shabaab dil ku xukumaan laakiin inta aysan jawaabin indhaheeda waxaa buuxiyay ilmo,dareen cusub ayaa hareeyay wejigeeda,waxay aamusneed lix daqiiqo ugu yaraan.
“Waxay igu dhaheen macsi ayaa gashay,fisqi iyo fasahaad ayaad faafisaa,waxaad tahay naagta Maki Xaaji Banadir la niikineysa,markii ay laba jeer sidaas igu dhaheen kadib waxaan ka war helay iyagoo gurigeyga yimid oo doonaya inay dhagax igu dilaan,waana ka baxsaday”ayey tiri Faadumo Nuur.
Waxaan waydiinay hada maxaa kuu qorsheeysan,sidee iskugu dabareysaa Nairobi oo ay guryaha iyo noloshaba qaali tahay waxayna ku jawaabtay “Ilaahaa jooga”
Ma jiraan dad ku caawiya dhinaca dhaqaalaha oo aad biil ka hesho ayaan waydiinay,waxay ku jawaabtay “Fanaanka Maxamed Axmed Qoomaal iyo Aweys Amoore oo aan hada ka hor film isla duubnay ayaa lacag ii soo diray,wuxuu Qoomaal ii soo diray laba boqol dollar,Aweysna boqol,intaas ayaan aniga iyo Caruurteeyda ku noolnahay afar bilood oo aan Nairobi joogo”
Faadumo Nuur oo lagu leeyahay laba bil kirada guriga yar,waxaa ay ku celcelisay inay bisha sanadka cusub iska xaadiri doonto xerada qaxootiga XAGARDHEER hadii ay hesho lacag ay gaari ku raacdo.
“Qaxootiga ilmaha waxay iiga helayaan waxbarasho,gurina kiro maleeyga rabo” ayey fanaanada ku soo koobtay hadalkeeda.
Fadlan hadii aad awoodo caawi Fanaanadda,Hooyadda dhibaateeysan ee Faadumo Nuur Mohamed,kalana xiriir
Tel: +254-717440816,Nairobi Kenya.
Shabakada dhisme ayaanu ku wadnaa iyo dibuhabayn
Xaglatoosiye oo Dubai ku xaniban oo loo diiday inuu dhoofo